Manova an'i Fanontoloana - Hatsiklopedia
Manova an'i Fanontoloana
Ny '''Fanontoloana''', na '''fanatontoloana''' na '''mondialisation''' na '''globalization''' dia kamban-teny avy amin'ny teny hoe [[fanoto]] sy [[laona]], ary nisy diso tsipelina kely ka raha tokony hoe fanotolaona no fanoratra azy dia ny hoe fanontoloana kosa no notazomin'ny akademia. Nalaina avy tamin'ilay [[ankamantatra]] malagasy hoe "Izy mivady no miady ka ny zanany no voatorotoro" ny hevi-dehibe fonosin'ny teny hoe fanontoloana. Araka izany, ny teny hoe fanontoloana dia ilazana toe-javatra anankiray izay isian'ny fifandirana na fifaninanana eo amin'ny lehibe anankiroa, ary ny kely kosa no lasibatra voalohany amin'izany fifandirana izany. Ny ankamantatra voalaza etsy ambony moa dia milaza ny fitotoam-bary. Dia tsy misy hafa amin'ny akotry ianao rehefa lasibatry ny fanontoloana: afaka fotoana fohy ianao dia ho <span style='color: #44f;'>maivoka</span> (à court terme), afaka fotoana antonontonony (à moyen terme) ianao dia ho <span style='color: #44f;'>fotsy</span>, ary raha mitohy ela (à long terme) ny asan'ny fanontoloana dia ho <span style='color: #44f;'>torotoro</span> toy ny lafarinina ianao. [[Category:Tantara]] [[en:Globalization]] [[it:Globalizzazione]] [[ja:グローバリズム]] [[nl:Globalisatie]] [[pl:Globalizacja]] [[pt:Globalização]]